विचार Archives - Page 8 of 28 - चौतारीपोष्ट अनलाईन
कोरोनाको ऐनामा समाजको अनुहार
- धर्मेन्द्र बास्तोला ‘कञ्चन’ सन् २०१९ को अन्त्य र २०२० को सुरुआततिर चीनको वुहान सहरमा अहिलेसम्म नदेखिएको नयाँ भाइरस देखापर्यो । यसलाई चिनियाँ वैज्ञानिकहरूले ‘कोरोना’ नाम दिए । त्यही भाइरसलाई पछि ‘कोभिड १९’ भत्र थालियो । २०२० को सुरुदेखि ४ महिना बित्दासम्म यसले युरोप, अमेरिका, अफ्रिका, एसियासहित विश्वभर फैलावट बनायो । यो महामारीलाई पहिले नयाँ समस्या भनियो । पछि ‘होसियारीपूर्वक’ ‘एपिडेमिक‘ (महामारी) भत्र थालियो र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले अन्ततः ‘पानडेमिक’ (विश्वव्यापी महामारी) भन्यो । यो महामारीले विश्वलाई नै अस्तव्यस्त बनायो । विश्वका सबै मानिसलाई घरभित्र थुनिदियो । आपसी सम्पर्कबाट अलगथलग हुन बाध्य बनायो । विश्व–अर्थव्यवस्था तहसनहस हुने अवस्थामा पुर्यायो । लाखाैँ मानिसमा गुपचुप सङ्क्रमित भयो र डेढ लाखभन्दा बढीको ज्यानसम्म लियो । विज्ञहरूको भनाइ रहँदै आएको छ– विश्वमा समयसमयमा यसप्रकार
खवरदार ! नेताहरु सहिदको रगत र हाम्रो पसिना ले सराप्ला
कमल मिश्र मलाई राजनीति तिर चासो र जाँगर छैन र राजनीति गर्ने योजना पनि मैले वनाएको छैन । बिगतमा जति पसिना बगाईयो भोक, भोकै हिडियो जेल यातना भोगियो अंग भंग भ ईयो । तर अहिले पद प्रतिष्ठा र अर्थोपार्जन तिर लागिएन। देश बनोस जनताले सुख पाउन भन्ने मात्र चाहँना राखेर मत अनन्त जन्मको मयल रुपी पाप बाट कसरी मुक्त भ एर यो नित्य सनातन आत्मा को कल्याण कसरी होला भनी थोरै भ एपनि आध्यात्मिक साधनापथमा छु। मलाई म जहाँ लागे त्यहीँ ठीक लागेको छ। यदि राजनीति नै गरेको भए म भन्दा जुनियर शेरधन राई मुख्यमन्त्री वने, मेरा समकालिन नेता शंकर पोखरेल, योगेश भट्टराईर भानु ढकाल आदि मन्त्री छन्भने सांसद र सभाषद त गनेर साध्य छैन म पनि हुन्थेहोला केही पदवाला तर यसतिर मलाई मतलव छैन। म बिरामी परेको ठीक एक महिना भयो ओछ्यान मै छु। उपचारमा कसैलाई गुहारिन पनि अरुची पेटको सिकायत, अपच खोकी र छातीको समस्याले यतिलामो समय सतायो त
- हुकुमबहादुर सिंह १.के हो कोरोनाभाइरस कोभिड–१९ एउटा नोवल(नयाँ) भाइरस हो तर यो कोरोना भाइरस परिवार भित्रकै एक प्रकारको भाइरस हो । कोरोना भाइरसको खोज भाइरोलोजिस्ट डाक्टर अलमेडाले सबैभन्दा पहिले सन १९६४ मा लण्डनको सेन्ट थोमस अस्पतालमा रहेको प्रयोगशालामा गरेकी थिइन । अलमेडाको जन्म सन १९३० मा स्कटल्याण्डको ग्लासगो शहरको उत्तर–पूर्वस्थित एक बस्तीमा बस्ने निकै साधारण परिवारमा भएको थियो । १६ वर्षको उमेरमा स्कूलको पढाई पूरा गरेपछि जूनले ग्लासगो शहरकै एक प्रयोगशालामा प्राविधिकको रुपमा काम गर्न सुरु गरिन । पछि उनी नयाँ सम्भावनाको खोजका लागि लण्डन गइन । त्यहाँ बार्थोलोमेउ अस्पतालमा आफ्नो करियर अघि बढाइन । उनले आफ्नो अनुसन्धानलाई सामान्य रुघा–खोकीमाथि केन्द्रीत गरिन । विवाह गरेको केही वर्षपछि उनी पती र आफ्नी छोरीसँग क्यानडाको टोरोन्टो शहर गइन । उनी त्यहाँको ओन्टोरियो क्यान्सर इन्स्टिच्युटमा इलेक
कोरोनाबाट आहात जनता माथि सरकारी लात
उरास लोहोरुङ् राई स्वासप्रश्वास सम्बन्धी रोग उत्पन्न गर्ने कोरोना नामक भाइरस (जसको वैज्ञानिक नाम सार्सकोभ–२) बाट उत्पन्न हुने कोभिड–१९ नामक सरुवा रोगबाट अहिले विश्वका अधिकांश मुलुकहरू आतंकित बनेका छन् । अनि हरेक मुलुकहरूले आफ्नो दक्षता, क्षमता, स्रोत र साधनले भ्याएसम्म यसको उपचार, रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । नेपालमा पनि यो रोगबाट संक्रमितहरूको संख्या बढिरहेको छ । यसले चारैतिर भय र समस्या उत्पन्न गरेको छ । सरकारले यो रोग रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्नलाई मुलुकभरी नै लकडाउन (बन्दाबन्दी वा निषेधाज्ञ) जारी गरेको छ । जसको प्रत्यक्ष असर दैनिक ज्याला मजदूरी गर्ने मजदूर वर्ग र रोगी विरामीहरू माथि परेको कहर खपीनसक्नु भएको छ । किनकि, सरकारको ध्यान जनताहरूको समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि यो संकटको समयमा जनताहरूलाई आँखामा छारो हालेर कसरी, कहाँ, कति भ्रष्टचा
- रामसिंह श्रीस अहिलेको विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को महामारीले पुँजींवादी व्यवस्था असफल भयो भन्ने कुरा प्रस्त भएको छ । यो महामारीले बैज्ञानीक समाजवादमा नगईनहुने रहेछ भन्ने कुरा फेरी एकपटक प्रस्ट भएको छ । अमेरिका जस्तो शक्ति सम्पन्न राज्यमा उपचारको लागी आवश्यक भेन्टीलेटर र मास्क समेत अपुग भएको कुरा संचार माध्यममा आएका छन् । तर अमेरिकाको भन्दा फरक व्यवस्था भएको क्यूवा, उत्तर कोरिया,चीन आदि देशहरुले आफ्नो देशको समस्याहरुलाई हल गर्दै अन्य देशहरुमा पनि स्वस्थ्य सम्बन्धी सामग्रीहरु र चिकित्सकहरु सहयोग स्वरुप पठाउनुले यहि कुराको पुष्टी गर्दछ । त्यस कारण नेपालमा पनि यो संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा नयाँ जनवादी व्यवस्था हुदै बैज्ञानिक समाजवादी व्यस्थामा जानु पर्ने कुरा अपरिहार्य छ । तर जनता प्रति उत्तरदायी सरकार छ भने यही प्रतिक्रियावादी व्यस्था भित्र पनि जनहितका कामहरु हुन सक्छन ्। तर अहि
कोरोनाको असर: लत्रिदो अर्थतन्त्र र बाँझो खेतको भाग्य
नारायण खनाल, मालारानी-३, अर्घाखाँची । कोभिड -१९ आतंकले गर्दा संसार त्राहि त्राहि बनेको छ। मानवीय मृत्युका कहालीलाग्दा समाचार सुन्न बाध्य बनिएको छ। अर्थतन्त्रका अगुवा मुलुकहरु महामारीबाट थिलोथिलो बनेकाले विश्व अर्थतन्त्र लतारिने कुरा पक्का पक्की भएको छ। अर्थतन्त्रका अगुवा मुलुकको ऋण तथा अनुदान सहयोगबाट झण्डै २५% वार्षिक वजेट तयार हुने हाम्रोजस्तो गरीब राष्ट्रका वार्षिक बजेटमा सहायता कसरी पुग्छ, अहिले यो विषय गम्भीर बन्दै गएको छ। हिजो कर्मठ युवालाई स्वदेशमा केही गरौँ भनेर उत्प्रेरित गर्नुको साटो राज्यले नै “फ्रि भिसा फ्रि टिकट “मै विदेशीन प्रेरित गर्ने काम ग-यो । जसको फल हामीले भोग्नुपर्ने बेला आएको छ।अब रोजगार गन्तव्य मुलुक नै धराशायी बनेपछि सिँगो अर्थतन्त्रको एक चौथाइ हिस्सा धानेको रेमिटान्स मा नकारात्मक असर पर्छ नै जसले गर्दा उच्च ब्यापार घाटा कम गर्न तथा विदेशी बिनिमय सञ्चितिमा
कोभिड १९ : पुँजीवाद उत्पन्न महामारी
- अनिल शर्मा नोबेल कोरोना जीवाणु रोग (कोभिड १९) को उत्पत्ति कहिले, कहाँ र कसरी भयो भन्ने विषयमा राजनीतिक र चिकित्सकीय कोणबाट बहस चलिरहेको छ । चीन र अमेरिकाका अधिकारीबीच चलेको पछिल्लो जुहारीको अन्तर्यलाई अर्थराजनीतिक दृष्टिले हेर्नेहरूको पनि कमी छैन । चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका एकजना उच्च अधिकारीले कोरोना जिवाणु रोग अमेरिकी सेनाले सर्वप्रथम चीनमा ल्याएको आरोप लगाएका छन् । उता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोभिड १९ लाई ‘चिनियाँ कोरोना’ भनेका छन् र त्यही नाम स्थापित गराउन ‘लबिङ’ गरिरहेका छन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका एकजना अधिकारीले ट्रम्पको बयानले एसियाली नागरिक हिंसाको चपेटामा पर्नसक्ने चिन्ता व्यक्त गरे । अधिकारकर्मीहरूले ट्रम्पको त्यसप्रकारको भनाइलाई ‘घृणाको राजनीति’ भनेका छन् भने कानुनविद्हरूले ‘घृणा अपराध’ भनेका छन् । अरूको लागि हिंसा र घृणा राजनीति (कसैका विरुद्ध घृणा फैलाएर
अम्बिकाप्रसाद अधिकारी कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का विषयमा बाहिर आएका तथ्यले विद्वत् वर्ग यसको अध्ययन–अनुसन्धानमा प्रभावी नभएको अनुभँत हुन्छ । विश्वका शक्तिशाली र सुविधासम्पन्न राष्ट्रहरूमा पनि यसले तहल्का मच्चाइरहेकोछ । यो कसरी नियन्त्रण हुन्छ, कुनै उपाय सुझाइएको छैन । संकटकाल, लकडाउन, कर्फ्यु यसका रोकथामका औषधि हुन् भनिदैछ, गरिँदै छ । यसले मानव बन्दी भएको छ । बन्दीले त रासन पाउँछतर विश्व नै ठप्प हुँदा रासन कहाँबाट आउने हो, संकट छ । विश्व नै एक कारागार बन्दैछ । यसको आर्थिक प्रभाव देखिन थालेपछि स्थिति के हुने हो, आँकलन भएको छैन । सुरक्षा किन र कसरी? नेपालीहरू१९ लाखको संख्यामा देशबाहिर रहेको वि.सं. २०६८ को जनगणनाले देखाउँछ । हामी ४०–६० लाख बाहिर छौं भन्छौं । विदेशका नेपाली बन्दाबन्दीको सिकार भएकै छन् । कति फर्कने तयारीमा थिए, कति बिदा लिएर फर्किने समय पर्खिरहेका थिए, रोकिए । यसबीचमा फ
येशू ख्रीष्टको क्रूसको मृत्यु नै मानव जातिको उद्धार थियो ।
– होमराज राई रोमीहरुले यातनापूर्ण प्राणदण्डको लागि प्रयोग गर्न तयार गरिएको क्रूस हो । यहूदीहरुमा यस्तो चलन थिएन तापनि येशूले अन्तमा यहूदीहरुले पनि उहाँको हत्या गर्नलाई यही तरिका अपनाउनेछन् भनि जान्नुहुन्थ्यो, पुरानो समयका इस्राएलीहरुले तिनीहरुका अपराधीहरुलाई ढुड्डाले हानेर मार्थे । यसरी मरेपछि त्यो व्यक्ति परमेश्वरको सराप र दण्डमा परेको थियो भन्ने चिन्हस्वरुप उसको मृत देहलाई रुखमा झुन्ड्याइन्थ्यो, (ब्यबस्था २१ः २२–२३ )। येशूको समयका यहूदीहरु रोमी कानूनको अधिनमा भएका हुनाले उनीहरुसित कसैलाई मृत्युदण्ड दिने अधिकार थिएन तर कसैलाई प्राणदण्ड दिनको निम्ति तिनीहरुले रोमी अधिकारीवर्गलाई निवेदन गर्नुपथ्यो । येशूको सम्बन्धमा उनीहरुले उहाँलाई ढुड्डाले हानेर मार्ने अनुमति पनि मागेनन् किनकि येशूलाई त्रूmसमा चढाएर मृत्युदण्ड दिन सजिलो हुन्छ भनि तिनीहरुले जान्दथे, (मत्ती २७ः२२–२३ )। येशू क्रूसमा
- सीपी गजुरेल नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड १९) महामारीका रुपमा फैलि सकेको छ । संसारका करिव २१० देशहरु यसको चपेटामा परेका छन् । यी हरफ लेखिँदा सम्म विश्वभरी नै यो महामारीको संक्रमण हुनेहरुको संख्या १६ लाख ३ हजार ७१९ पुगेको छ भने ९५ हजार ७२२ जनाले ज्यान गुमाइ सकेका छन् । निको हुनेको संख्या ३ लाख ५६ हजार ६५५ पुगेको रेकर्ड गरिएको छ । यो महामारीबाट साम्राज्यवादी देखि लिएर गरीव र उत्पीडित देशहरु सबै यसका शिकार भएका छन् । त्यसकारण नोवेल कोरोना भाइरसका विरुद्धको लडाईं आज सबैको साझा एजेण्डा बन्नु पर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । यो महामारीले आफूलाई सर्व सम्पन्न, सर्ब शक्तिसाली र सर्बै विषयमा नम्बर १ भनेर दावी गर्ने महाशक्ति राष्ट्रहरुको हैशियतलाई पनि उजागर गरिदिएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिका यो महा भूकम्पको केन्द्र बन्न पुगेको छ । नेपाली जनतालाई समृद्धि नै समृद्धिले छाइदिने र सुखै सुखले भरपुर बनाइदिन